Ukuthengisa ngoSuku lweValentine Day Retail kunye ne-eCommerce Buyer Predictions ka-2021 | Martech Zone
Ukuba ishishini lakho lokuthengisa okanye i-ecommerce belisokola ngenxa yobhubhane kunye nokutshixeka, unokufuna ukusebenza ixesha elongezelelekileyo Imikhankaso yoSuku lweValentine nanjengoko kubonakala ngathi lo iya kuba ngunyaka ogciniweyo wenkcitho-ngaphandle kwemiceli mngeni yezoqoqosho! Mhlawumbi ukuchitha ixesha elininzi ekhaya kunye nabantu esibathandayo kuphemba ilangatye lothando… okanye kufuna ukuba silungise izinto (sidlale).
Uvavanyo lweSizwe lweRetail Foundation luqikelela ukuba abathengi baceba ukuchitha i-avareji ye- $ 196.31, phezulu 21% ngaphezulu konyaka ophelileyoIngxelo yangaphambili ye-161.96 yeedola. Inkcitho kulindeleke ukuba ibe yi-27.4 yezigidigidi zeedola, inyuke ngama-32% ukusuka kwirekhodi yonyaka ophelileyo eyi- $ 20.7 yezigidigidi.
Iinkcukacha-manani zoSuku lweValentine kaValentine
Ngokutsho Isiseko seSizwe seNtengiso, Usuku lukaValentine aluselulo nje usuku ukubonisa ukuxabisa kwakho uthando lweqabane lakho. Abathengi bathenga izipho ngenxa yabanye babo ababalulekileyo, abantwana babo, ootitshala babo, abasebenza nabo… kwanezilwanyana zasekhaya! I-15% yabantu baseMelika bazithengela isipho soSuku lweValentine.
Inkcitho yomthengi -Abathengi bathi bazakuchitha i-avareji ye- $ 30.19 kumalungu osapho ngaphandle kwamaqabane, inyuke kancinci ukusuka kwi-29.87 yeedola kunyaka ophelileyo; Iidola ezingama-14.69 kubahlobo, zinyuka zisuka kwi- $ 9.78; Iidola eziyi-14.45 kubantwana ofunda nabo kunye nootitshala, ukusuka kwi- $ 8.63; I $ 12.96 kubantu osebenza nabo, inyuka isuka kwi- $ 7.78; $ 12.21 kwizilwanyana ezifuywayo, ukusuka kwi- $ 6.94, kunye ne- $ 10.60 kwabanye, ukusuka kwi- $ 5.72.
Usuku lukaValentine kwizilwanyana zasekhaya - Iipesenti ezingama-27 zabathengi bathi bazokuthenga izipho zeValentine kwizilwanyana zabo zasekhaya, elona nani liphezulu kwimbali yophando kwaye inyuke isuka kwiipesenti ezili-17 ngo-2010 iyonke nge-1.7 yezigidigidi.
Inkcitho ngokobudala -Ages 18-24- cwangcisa ukuchitha i-avareji ye- $ 109.31. Iminyaka engama-25-34 idla ngokuba nemali ephezulu kunye nokuthengela abantwana kwaye balindele ukuchitha i-307.51 yeedola. Iminyaka engama-35 ukuya ku-44 ngabona bantu bachitha imali enkulu kwi-358.78 yeedola.
Inkcitho ngesini -Njengonyaka ngamnye wovavanyo, amadoda acwangcisa ukuchitha ngaphezulu kwabafazi kwi $ 291.15 xa kuthelekiswa ne- $ 106.22.
Iindidi zokuThengwa koSuku lweValentine
Umhla wobusuku I-4.3 yezigidigidi zeedola iya kuchithelwa kubusuku obukhethekileyo nge-34% yabathathi-nxaxheba boSuku lweValentine.
ilekese I-2.4 yezigidigidi zeedola izakusetyenziswa ngabathengi abangama-52% abaceba ukuthatha inxaxheba kwisipho sikaSuku lweValentine- nge22% becwangcisa ukunika itshokholethi.
nezacholo I-5.8 yezigidigidi zeedola iya kuchitha ngama-21% yababhiyozeli abaceba ukuthatha inxaxheba.
iintyatyambo - $ 2.3 yezigidigidi iya kuchithwa ngama-37% aceba ukuthatha inxaxheba.
Cards Cards - $ 2 yezigidigidi iya kuchithwa kumakhadi ezipho kulo nyaka.
Amakhadi okubulisa I-1.3 yezigidigidi zeedola izakusetyenziswa kumakhadi emibuliso yosuku lweValentine.
Amanqanaba asezantsi abandakanya izixhobo, ubulungu bokuzivocavoca, izixhobo zemidlalo, izixhobo zasekhitshini, izilwanyana ezifakiweyo… kunye nemixube (ngaba abantu bayayenza loo nto?!).
Imikhankaso yoSuku lweValentine
Gcina ukhumbula ukuba imali isabambe nkqi abathengi abaninzi kulo nyaka kwaye uninzi lwabathathi-nxaxheba kuValentine's ukupha izipho kuyakwenziwa ngomzuzu wokugqibela… ke ngoko qalisa amaphulo akho kwaye ubagcine beqhubeka ukuya kumhla onokuhambisa ngawo!
Sabelane ngenye inqaku kunye ne-infographic nabanye usuku olukhulu lweValentine Day Social Media Contest izimvo!
tags: i candytshokolejiisimilo sabathengieCommerceAmakhadi wesiphoamakhadi okubulisalwalawonezacholouthandouthando lusemoyenizokutyelaabathengisiusuku lwezithandaniusuku lweValentine infographicInkcitho yomhla wosuku lweValentineIzipho zikaValentine DayInkcitho yosuku lweValentine DayUsuku lweValentine lokuthenga
Ukubhala ngokuLula: Iqonga leSMS kunye neMiyalezo ebhaliweyo